Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Tukaraq iyo ciidan gurmad ah oo ku qulqulaya - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Tukaraq iyo ciidan gurmad ah oo ku...
Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Tukaraq iyo ciidan gurmad ah oo ku qulqulaya
Tukaraq (Caaimada Online) – Dagaalkii ka socdey aaga Tukaraq ee gobolka Sool ee u dhexeeyey Puntland iyo Somaliland ayaa istaagey xiligii makhribka ee xalay, Soomaaliya, waxaana uu socdey muddo 10 saac ah.
Dagaalka ayaa u qaybsanaa dhawr qaybood waxaana bilowgiisu ka dhacay hawdka u dhexeeya Boocame iyo Tukaraq, dagaalkaas oo ka dhacay laba aag ayaa waxaa uu qaboobay duhurkii kadib markii roob xooggan halkaas ka da’ay. Dagaalka labaad ayaa ka dhacay ka dhacay waddada laamiga ah.
Magaaalada Tukaraq ayaa cidlo ah waxaana ka qaxay dadkii deganaa halkaas. Sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal gelinkii danbe ee shalay ayaa dagaalku badnaa mid la isku garaacayo madaafiicda culus sida qoriga PM-ka.
Labada ciidanba waxaa soo gaarey gurmadyo xoojin ah, waxaana aad loo saadaalinayaa in waaberiga maanta dagaalku dib u qarxi doono haddii aan isla habeenimada caawa ah, ciidanka Somaliland baneyn aaga qoraxdu ugu dhacdey.